နို့တိုက်မိခင်စားတဲ့ အစာက ကလေးအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသလား – Healthy Life Journal
——–၊ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၊———
Q. ဆရာခင်ဗျာ။ မိခင်စားသော အစားအစာမှ နို့စို့နေသော ကလေးငယ်ကို Effect ဖြစ်စေပါသလား ဆရာ။ ဥပမာ- မိခင်က မျှစ်-မျှစ်ချဉ်၊ ကြက်ဟင်းခါးသီး၊ ဒညင်းသီးစားလို့ ကလေးကို နေမကောင်းတာ တစ်ခုခုဖြစ်စေတာမျိုး၊ အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေတာမျိုး။ မိခင်က paracetamol, burmeton သောက်လို့ ကလေးကို effect ဖြစ်စေတာမျိုးတွေ ရှိပါလားဆရာ။ နောက်တခုက မိခင်ပက်လက်လှန်အိပ်လို့ နို့ခမ်းစေတာမျိုးဆိုတာရော ဟုတ်ပါသလားဆရာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။
A. မေးကြတယ်။ ယေဘုယျ မိခင်နို့ထဲမှာ နို့သာပါတယ်။ အစားအသောက် ဘာစာစားစား နို့သာထွက်တယ်။ အစားမစားနိုင်တာတောင် နို့ထွက်နိုင်တယ်။ ဆေးတချို့ကတော့ နို့ထဲရောက်တယ်။ ဆေးတခုချင်းကို ပြောရတယ်။
မိခင်သွေးထဲမှာ ကူးစက်ပိုး ဥပမာ HIV နဲ့ အသည်းရောင်ဘီပိုးရှိနေရင် နို့ကနေတဆင့် ကလေးကို ကူးစက်နိုင်မှု ပိုနိုင်တယ်။ အစားအသောက်မှာ မေးခွန်းထဲပါတာတွေကို ဆေးသုတေသနမလုပ်လို့ မဟုတ်ပါဘူးပြောရင် အစွန်းတော့မလွတ်ပါ။
မိခင်အနေအထားကြောင့် နို့နည်း-များ မဖြစ်စေပါ။ နို့ထွက်စေဖို့ ဦးနှောက်အောက်ခြေက ထုတ်ပေးနေတဲ့ ပရိုလက်တင်ဟော်မုန်းက လုပ်ပေးနေတာဖြစ်တယ်။ ဟော်မုန်းနည်းရင် နို့ထွက်နည်းမယ်။ ပရိုလက်တင်ဟော်မုန်းများတဲ့သူ အိမ်ထောင်မပြုဘဲ နို့ရည်ထွက်တယ်။